China Rubber ntekwasa cone erute ala factory na-emepụta | Yuantuo
Nhazi nke Cots
Enwere ike kewaa ya n'ime akwa mpempe akwụkwọ, akwụkwọ ndetu, akwụkwọ ndozi, akwụkwọ ndozi osikapa, akwa ndị a na-eji ọla na mmanụ.
Dị ka elu morphology, ọ nwere ike kere n'ime ewepụghị ala na patterned roba ala;
Dabere na ihe enwere ike kee n'ime: butyl cots, akwa nitrile, akwa polyurethane na akwa silicone roba.
A na-ejikarị akpati mejupụtara akwa roba dị larịị, akwa roba siri ike, isi igwe, olu mpịakọta na ikuku ikuku. Ya nhazi na-agụnye ájá ọgbụgba ọkụ nke mpịakọta isi, bonding ọgwụgwọ, gluing akpụ, ákwà wrapping, waya asọfe, gwọọ na vulcanizing tank na elu nhazi. A na-ejikarị akpa akwa na mpempe akwụkwọ, ibi akwụkwọ na dyeing, ibi akwụkwọ, nhazi ọka, metallurgy, nhazi plastik, wdg.
* Mbipụta ndina na dechapụ pịa bụ tumadi nyefee ink. Ya mere, a ga-eji nlezianya hichaa ụdọ a na-ehicha kwa ụbọchị, ma ọ bụghị ya, akwa akwa oyi akwa na ink, resin dị mfe oxidized na-etolite a ezigbo na ike film, n'ihi na elu vitrification na-emetụta ink nyefe. Ọ bụrụ na anaghị ehicha ya mgbe niile, elu COTS ga-abụ nke na-enweghị isi maka ogologo oge, nke ga-emetụta ojiji ahụ. Ya mere, a ga-ehicha ihe ndina ahụ ma debe ya mgbe igwe kwụsịrị.
* Na dechapụ ọrụ obibi akwụkwọ, n'ihi "mmiri nnukwu ink nnukwu" ink emulsification, na ezigbo akwa na nguzobe nke a hydrophilic isi, mee ya deinking. Ngwọta ahụ bụ iji shọvel gbanyụọ ink ahụ, sachaa mmanụ ndina na mmanụ ụgbọala, jiri 5% sodium hydroxide solution na paịlị megharịa ha, ma mesoo mpịakọta igwe (ma ọ bụ mpịakọta siri ike). Mpempe akwụkwọ siri ike nwekwara ike ịnọ na steeti mmiri ifesa mmiri, jiri ezigbo mmiri na-egweri ájá, attentionaa ntị ka ị ghara ịnọ n'otu ọnọdụ, ma ọ bụghị ya, ọ ga-emebi ụdọ. Fundamentalzọ bụ isi bụ ịchịkwa pH uru nke ịwụ mmiri ma rụọ ọrụ dị mma nke njikwa ink.
* Otssọ ndị e ji mee agadi dị ogologo, tinyere mbuze kemịkal, na-akpata ire ere “slag”, ụdị ndina ndị ahụ anaghị eji, ma ọ bụ na-emetụta àgwà mbipụta akwụkwọ nke ọma.
* Iji hụ na mmepụta na mbipụta akwụkwọ anaghị emetụta, enwere mpempe akwụkwọ ink, mana echekwala nke ukwuu iji zere ịka nká. Ebe nchekwa nke COTS bụ otu ihe dị ka blanket. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndina kwesịrị ịnọ na etiti kwụ ọtọ na akwụkwọ akụkọ ahụ, elu ekwesịghịkwa ịkpọtụrụ ibe ya ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, iji zere ndina ndozi.
* Achọghị inwe ndina n’akụkụ nnukwu moto na igwe na-enye ọkụ. N'ihi na ọtụtụ ozone nke akụrụngwa ndị a mepụtara ga-eme ka elu COTS na-aka nká ma na-agbawa.
* Mgbe ihu igwe dị oyi, ink adịghị ahụkebe, ịnwere ike ịgbakwunye ihe inyeaka na ink ahụ nke ọma. Amachibidoro ime ink Cots na infrared kpo oku na akụrụngwa ndị ọzọ iji gbochie ụdọ site na oxidation.
Nke gara aga: Grooved cone ala
Osote: Igwe anaghị agba nchara cone ala